Fine dining experience in Myanmar - Yangon Thu Michelle Video
Activities, Video Aug 10, 2018
အနောက်တိုင်း အစားအစာတွေက မြန်မာလူမျိုးနဲ့ သိပ်မရင်းနှီးပါဘူး။ စားလေ့စားထမရှိရင် ယောင်လည်လည်နဲ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဇွန်း ခရင်း တူ လောက်နဲ့ အဆင်ပြေနေသေးတယ်။ ဓားပေါင်းများစွာ ခရင်းတစ်ထောင်လောက်ဆို ဟိုဟာကိုင်ရမလို ဒီဟာကိုင်ရမလို ဖြစ်နေပြီ။ ပြီးတော့ ပိုက်ဆံအပိုမကုန်ချင်တဲ့မီရှဲလိုလူအတွက် ဒီလိုနေရာကို တော်ရုံမရောက်ဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရောက်ခဲ့ရင် ရှိုးတို့ရှန်းတန်း အူကြောင်ကြောင်မဖြစ်အာင်(မဂွမ်းအောင်) နေတတ်စားတတ်ဖို့သိတော့သိထားသင့်တယ်လေ။
တစ်ခုရှိတာက အလေ့အထဆိုတာ တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာမတူပါဘူး။ အနောက်တိုင်းကလူတွေ မြန်မာထမင်းဆိုင်မှာ ချဉ်ပေါင်ဟင်းရည်ကို စွပ် (soup) မှတ်ပြီး တထိုင်တည်းကုန်အောင်သောက်နေတာလဲ မြင်ဖူးတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း (middle east) မှာ လက်နဲ့စားပြီး ဟင်းပေတဲ့လက်ကိုစုပ်ရတာ ယဉ်ကျေးမှု။ ဒါကြောင့် မရင်းနှီးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ အလိုက်သင့် မရိုင်းအောင် စားသောက်တတ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ် ထင်ပါတယ်။ မသိတာကို မေးတာ ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ သိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဟန်လုပ်တာ ပိုရှက်စရာကောင်းပါတယ်။ အလိုက်မသိတာ သူများကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာ ရှက်စရာကောင်းတယ်။ တခြားနိုင်ငံရောက်ရင်လည်း အလေ့အထ ယဉ်ကျေးမှုတွေ လေ့လာတာလည်း မမှားပါဘူး။
ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင် နိုင်ငံတကာ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ရလေ့ရှိတဲ့ Menu ကိုအဓိကရိုက်ပြထားတယ်။ တစ်ပွဲချင်းစီလဲစားလို့ရတယ်။ အဲ့ဒါကိုကျတော့ A la carte (အလကဒ်)ဆိုပြီး menu သပ်သပ်ရှိတယ်။ စားလိုက်တာကတော့ set menu ။ နေ့လယ်စာနဲ့ ညစာက သဘောတရားတူတူပဲ။ appetizer (ခံတွင်းဖွင့်စာ) ကနေစစားတယ်။ ပြီးရင် main course (အဓိကဟင်း) နောက်မှ dessert (အချိုပွဲ)။ ကြားထဲက ပိစိကွစတွေက စားဖိုမှူးရဲ့ စေတနာတွေ။ Fine dining ဆိုင်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကွာခြားချက်က ဟင်းလျာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဘယ်လိုစားကောင်းအောင် ဆက်စပ်ထားလဲ၊ လိုက်ဖက်တဲ့ဝိုင်၊ အပြင်အဆင်၊ အခင်းအကျင်း အပေါ်မူတည်တယ်။ အရသာကတော့ မြန်မာပါးစပ်နဲ့ ရေရှည်မကိုက်။ (ကိုက်ချင်ရင် မြန်မာထမင်းဆိုင်စား) တစ်ခါတလေစားရင်တော့ အပြောင်းအလဲအနေနဲ့ စားကောင်းတယ်။
နောက်တစ်ခုက အခုဆို romantic dinner တွေ ခေတ်စားတယ်လေ။ ကိုယ့်ကောင်မလေးကို အလေးထားကြောင်း ပြချင်လို့ သွားစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အထိမ်းအမှတ်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ကိစကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ချင်လို့ စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရောက်သွားရင် အထာကျကျစားနိုင်ဖို့ သိသလောက် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
P.S: SEED Restaurant က မီရှဲအကြိုက်ဆုံးက SEED Signature coffee
ဗင်နီလာအချို နဲ့ သစ်ကြမ်းပိုးမှုန့်ပါတဲ့ ကော်ဖီ။ တစ်ခါသောက်ဖူးပြီး ရောက်တိုင်းသောက်နေမိတယ်။
ရိုက်ကူးခွင့်ပေးပြီး စားစရာတည်ခင်းဧည့်ခံပေးတဲ့ SEEDS Restaurant & Lounge ။ သိလိုသမျှ စိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြောပြပေးတဲ့ ကိုလင်းလင်း နဲ့ မငြီးမငြူရိုက်ကူးရေးမှာ ကူညီပေးတဲ့အကိုကို ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခါလာရင် SEED Signature coffee လေး ထပ်တိုက်ပါ။
Fine dining in Western restaurant is once inablue moon for asian. There’reafew do’s and don’ts while comes to dining. I hope you can avoid from embarrassing yourself.